Xiaomi Mi 11 Lite na-egosi na onyonyo: nke a bụ otu etiti etiti | Gam akporosis
Xiaomi Mi 11 Lite pụtara na onyonyo: nke a bụ otu etiti etiti si ele anya
Naanị otu izu gara aga, Xiaomi mere Mi 11 mba, ọkọlọtọ ya kachasị elu na nke na-eso ndị ọzọ na-arụ ọrụ nke ọma na Snapdragon 888, Exynos 2100, ndị na-arụ ọrụ Kirin 9000 na, n'ezie, ama A14 Bionic sitere na iPhone 12. Ugbu a, o yiri ka ụlọ ọrụ ndị China na-akwadebe ya mwepụta nke ụdị Lite nke ngwaọrụ a, nke ga-abata na njirimara na nkọwa dị n'etiti.
El My 11 Lite Ọ ga - abụ, dịka nhota na asịrị sitere na ya maka izu ole na ole, ọnụ ọnụ nwere chipset usoro processor Qualcomm Snapdragon 700. Agbanyeghị, ọ ga - abụ ama ama ga - enwe atụmatụ ewepụtara na nke mbụ Mi 11, ma ọ bụ nke a bụ ihe ọhụụ emere ọhụụ emeela ka ọ mata ya na ndị anyị na-egosi gị n'okpuru na-egosi.
Xiaomi Mi 11 Lite ga-abụ nnomi nke mbụ Mi 11 na ọkwa ọkwa
Xiaomi egosighi ihe obula banyere ihe omuma a, mana enwere otutu nkowa banyere njirimara ya na nkenke oru ya, yabụ na anyi amaala ihe ufodu banyere ebe a. Na mgbakwunye na nke a, ihe ihe esere ese nke etiti na-egosi anyị na-eme ka anyị hụ nke ahụ Anyị ga-eche ihu na mkpanaka nwere atụmatụ dị adị.
Ndị na-enye ihe ngosi nke Xiaomi Mi 11 Lite
Ejiri Xiaomi Mi 11 na Disemba afọ gara aga site na ihuenyo nwere oghere na warara. Ọ bịakwara nwere oghere ihu igwe dị n'akụkụ akuku aka ekpe maka igwefoto selfie. Mi 11 Lite, dị ka ihe anyị nwere ike ịhụ site na foto ndị a sụgharịrị, ọ bụ ọnụ nwere otu ihu n'ihu, ma nke a, n’aka nke ọzọ, ga-enwe ihuenyo dị larịị, ya mere ngebichi na-ahụ ga-adị ala na nke a. N'agbanyeghị nke a, nke a nwere ike ịka mma maka ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ, ebe ọ bụ na ogwe ndị a na-atụgharị anya, ọ bụ ezie na ha dị elu karịa na nke mbụ, anaghị arụ ọrụ kwa ụbọchị, ebe ha bụ ndị amamịghe metụtara mmụọ.
Modul azụ nke Mi 11 Lite dịkwa ihe yiri nke mbụ na 11. O yiri ka Xiaomi chọrọ ịpịpụta usoro nke usoro a na 2021, yabụ anyị nwere ike ịnata ya na ụdị ndị ọzọ, ọ bụ ezie na nke ahụ agaghị adị, ebe anyị na-ekwu maka ọkọlọtọ ya dị elu.
Usoro igwefoto nke etiti dị n'etiti nwere ihe mmetụta atọ: nke bụ isi, akụkụ sara mbara na otu maka nnukwu égbè (ikekwe). Ikanam flash sokwa na nke a. Mkpebi nke ndị a ka bụ ihe omimi, mana ekwuru na nhazi ahụ nwere ike ịbụ 64 + 16 + 5 MP. Anyị ga-akwado ma ọ bụ jụọ nke a ma emechaa.
Ebe ọ bụ na anyị ahụghị onye na-agụ akara mkpịsị aka na ngalaba azụ, ọ nweghịkwa ihe na-egosi na ọ dị n'akụkụ etiti, anyị kwubiri na ihuenyo bụ AMOLED technology na-abụghị IPS LCD, ya mere ọ ga - ejikọta n'okpuru nke a. Na mgbakwunye, eriri nke ekwentị nwere ike ịbụ sentimita 6.5, ebe mkpebi ahụ agaghị adị elu karịa FullHD +.
Banyere arụmọrụ nke ekwentị ahụ, Xiaomi ga-emejuputa chipset usoro nhazi Snapdragon 700 n'okpuru mkpuchi nke ụdị a, mana ọ bụghị Snapdragon 765G, ebe anyị hụrụ SoC a na Mi 10 Lite. N'ihi ya, Snapdragon 768G yiri ka ọ bụ azịza kachasị arụ ọrụ, ọ bụ ezie na ikpo okwu mkpanaka a anaghị anọchite anya nkwubiga okwu ọ bụla gbakwunyere na arụmọrụ, ma e jiri ya tụnyere Snapdragon 765G nke ekwurularịrị, yabụ anyị na-eche maka ibe ọzọ.
A ga-enye RAM nke Xiaomi Mi 11 Lite dị ka 6 ma ọ bụ 8 GB, ebe nhọrọ ohere nchekwa ga-abụ 128 ma ọ bụ 256 GB, n'otu n'otu. N'aka nke ya, batrị ahụ ga-abụ ikike 4.500 mAh na 20 W na-ebu ọnụ ngwa ngwa, ọ bụ ezie na n'oge ikpeazụ a anyị na-atụ anya ịwụ elu nke na-eme ka anyị nwee ntụkwasị obi site na 0% ruo 100% na obere oge.
Ugbua n'okwu banyere ịdị adị nke ekwentị, anyị ga-echere maka ọkwa ọkwa gọọmentị, ebe Xiaomi ekpugheghị mgbe a ga-eme ya ọkwa. N'agbanyeghị nke a, nyere na ebido Mi 10 Lite na Machị, anyị na-ebu amụma na nke a ga-erukwa n'otu ọnwa ahụ, nke bụ nke na-esote.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Xiaomi Mi 11 Lite pụtara na onyonyo: nke a bụ otu etiti etiti si ele anya
Redmi Rịba ama 10 enweela ụbọchị mmeghe, ọ bụ Machị 4
Foto Google ga - enweta site na ihe nchọgharị faịlụ Chrome OS